ဝင်ငွေ အစီရင်ခံစာအပေါ် ဘယ်လိုအရောင်းအဝယ်လုပ်မလဲ?
ဝင်ငွေရရှိမှု ရာသီများသည် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ထူးခြားသောအခွင့်အရေးများကို ပေးပါသည်။ ဤကာလသည် အကြီးဆုံး အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှ ယခင်သုံးလပတ်ကာလအတွက် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်များပြီးနောက် ဈေးနှုန်းသည် ရာခိုင်နှုန်းသောင်းချီအားဖြင့် ခုန်တက် (သို့) ကျဆင်းသွားနိုင်သည့်အတွက် ရောင်းဝယ်သူများသည် အလွန်တိုတောင်းသော ကာလအတွင်း အမြတ်ရနိုင်ကြပါသည်။
အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ဝင်ငွေများသည် စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများအပေါ် လွှမ်းမိုးရုံသာမက ငွေကြေးအတွဲများတွင်လည်း ဈေးလှုတ်ခတ်မှုမြင့်မားစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ငွေကြေးဈေးကွက်တစ်ခုလုံးလာရာသည် ရွေ့လျှားမှုဖြစ်ပြီး၊ ဤအချိန်သည် အရောင်းအဝယ်အတွက် စံပြဖြစ်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စာားပါသလား? အောက်တွင် ဝင်ငွေများအပေါ် ရောင်းဝယ်ခြင်းအကြောင်း အချက်အလက်များ ပိုမိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်။
သင်သည် FBSနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဆိုတာ သိပါသလား? သင့်ပါစင်နယ် ဧရိယာတွင် MT5 အကောင့်ဖွင့်ပါ၊ အရောင်းအဝယ် တာမီနယ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲကာ၊ အမေရိကန် ဝင်ငွေရရှိမှု ရာသီများမှ အကျိုးအမြတ်ရယူပါ!
တစ်နှစ်တွင် ဝင်ငွေရရှိမှု ရာသီ ၄ခုရှိပြီး၊ တစ်ခုစီသည် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများအား သုံးလပတ်ကာလနောက်လိုက်သည့် (ဇန်နဝါရီ၊ ဧပြီ၊ ဇူလိုင်နှင့် အောက်တိုဘာ)လများအတွင်း ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ရောင်းဝယ်ရမလဲလေ့လာရန် ဝင်ငွေရရှိမှု ပြက္ခဒိန်ကို စစ်ဆေးသင့်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ် ကုမ္ပဏီများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု သီအိုရီသည် အလွန်ရိုးရှင်းသည်:
ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ (သုံးလပတ် (သို့) နှစ်စဉ်)သည် ကုမ္ပဏီမှ အမြတ် (သို့) အရောင်းများကို မြှင့်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါက၊ မြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတွင် စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စတော့အတွက် ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာပြီး၊ ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးတက်သွားသည်။
ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ အမြတ်သည် ကျဆင်းသည်ဟု ကြေညာပါက၊ ၎င်း၏စတော့များသည် သတင်းအပေါ် ကျသွားသည်။
ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်
အလေ့အကျင့်အရ၊ မသိမသာကွဲပြားချက်များရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုများအပေါ် ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် Forex စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်များမှ သတင်းအပေါ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကြားတွင် တူညီချက်များစွာ ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သုံးသပ်သူများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုရာသီမတိုင်မီ ရက်သတ္တပတ်များစွာအလိုကပင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော နံပါတ်များအကြောင်း ကြိုတ်ငခန့်မှန်းထားကြသည်။ များသောအားဖြင့်၊ သူတို့သည် ရှယ်ယာ (EPS)နှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဝင်ငွေများကို ခန့်မှန်းကြသည်။ ဤအချက်အလက်အား ဝင်ငွေရရှိမှု မထုတ်ပြန်ခင်ကတည်းက FBS ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရရှိနိုင်သည်။ ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်ပြီးပါက၊ တန်ဖိုးများသည် ဤတွက်ချက်မှုများ၏ အခြေခံနှင့် မြှုပ်နှံသူများ၏ မျှော်မှန်းချက်အပေါ် လှုပ်ရှားကြသည်။ ခန့်မှန်းချက်ကောင်းပါက၊ စတော့တန်းဖိုး တက်မည်။ ခန့်မှန်းချက်ဆိုးပါက၊ တန်ဖိုးကျမည်။
အကြံပြုချက် ၁. သင့်အမြတ် ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ရန် ကုမ္ပဏီ၏အစီရင်ခံစာကို နက်ရှိုင်းစွာသုံးသပ်လိုပါက၊ သင်ရောင်းဝယ်ချင်သည့် စတော့ရှယ်ယာ၏ ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်ကို စစ်ကြည့်ပါ။ မြန်ဆန်စွာရနိုင်ရန်၊ "[ကုမ္ပဏီအမည်] မြှုပ်နှံသူ ပတ်သတ်မှု" ကို ဂူဂဲခေါက်လိုက်ပါ၊ ဝင်ငွေထုတ်ပြန်ချက်၏ အချိန်အတိအကျ၊ ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်၊ ၎င်းထွက်လာသည်နှင့် တကယ့်အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ရပါလိမ့်မည်။
ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံး အရာများစတင်ပါပြီ။ အံ့သြဖွယ်ရာမှာ အလွန်အရေးကြီးသည်: တကယ့်ထွက်ရှိချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်ကြားမှ ကွာခြားချက်ကြီးလေ၊ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှု ကြီးလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် "ကောလဟာလတွေကို ဝယ်ပြီး၊ အမှန်တရားကို ရောင်းချပါ" ဟူသည့်မြင်ကွင်း ဖြစ်နိုင်သည်: ဈေးကွက်သည် ရလဒ်ကောင်းတွင် တန်ဖိုးဖြတ်ပြီးဖြစ်နေကာ၊ ထုတ်ပြန်ချက်မတိုင်မီ စတော့များဝယ်ခဲ့သည့် မြှုပ်နှံသူများမှ ထို့နောက်ရောင်းချနေပါက ကိန်းဂဏန်းများအားကောင်းသော်လည်း ဈေးနှုန်း ကျဆင်းနိုင်သည်။
ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာအပေါ် ဈေးနှုန်းမည်ကဲ့သို့ ရွေ့လျှားသနည်း သာဓကဒီမှာပါ။ Facebook စတော့များသည် ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၈တွင် ၂၅% ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်ငွေသည် စိတ်ပျက်ဖွယ် (Thomson Reuters သဘောတူခန့်မှန်းချက် တစ်ခုစီအပေါ် $၁၃.၂၃ ဘီလျံ vs. $၁၃.၃၆ ဘီလျံ)ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေ့စဉ် အသုံးပြုလျှက်ရှိသူဦးရေသည် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် (StreetAccountနှင့် FactSet ခန့်မှန်းချက်အရ ၁.၄၇ ဘီလျံ vs. ၁.၄၉ ဘီလျံ) နိမ့်ကျခဲ့သည်။ စတော့ရှယ်ယာသည် ထုတ်ပြန်ချက်ထက်စောပြီး အဆက်မပြတ်တက်နေကာ၊ အဝယ်လွန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုပါ။
ပါးနပ်သော ရောင်းဝယ်သူများသည် ကုမ္ပဏီ၏ EPSနှင့် ဝင်ငွေအပေါ် အာရုံစိုက်ရုံသာမက၊ ပိုကြီးသောပုံရိပ်အတွက်လည်း သုံးသပ်ကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ် အောင်မြင်စွာရောင်းဝယ်ရန် ကူညီပေးမည့် အထူးစွမ်းရည်များ ဒီမှာပါ။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း စတော့များ မည်ကဲ့သို့ရောင်းဝယ်ခဲ့သလဲ ကြည့်ပါ။ တန်ဖိုး၏ ဒိုင်းနမစ်အား ဝင်ငွေရရှိမှု ပြက္ခဒိန်ရှိ သုံးသပ်သူများ၏ ခန့်မှန်းချက်နှင့်ယှဉ်ကြည့်ပါ။ တန်ဖိုးသည် မြင့်လွန်းပါက၊ သတင်းများအပေါ် စတော့ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုး ကျလွန်းနေပါက၊ ဝယ်ရန်အတွက် ပြင်ထားနိုင်ပါသည်။
ဈေးကွက်မှ ယခင်ထုတ်ပြန်ချက်ပြီးနောက် မည်ကဲ့သို့တုန့်ပြန်သလဲ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ၎င်းကိုယ်ပိုင် ထူးကဲမှုများရှိပြီး၊ မှတ်တမ်းကို လေ့လာခြင်းမှ တန်ဖိုးရှိသောအမြင်များရနိုင်ပါသည်။
RSI ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါ။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ အညွန်းကိန်းမှ ဈေးကွက်သည် အဝယ်လွန် (သို့) အရောင်းလွန်သလား ပြပေးပါသည်။ RSI မြင့်နေပါက၊ စတော့သည် အဝယ်လွန်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်အနေအထားတွင်မဆို ကျဆင်းနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ RSIသည် နည်းလွန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ စတော့များ အရောင်းလွန်ခြင်းအား ဝယ်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း ယူဆပါသည်။
မီဒီယာဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပါ။ လူတိုင်းသည် သီးသန့်ကုမ္ပစီတစ်ခုထဲမှာ စွဲလမ်းနေပြီး၊ ကြီးမားသည့် အမြတ်အစွန်းကို မျှော်မှန်းပါက၊ စတော့တန်ဖိုးများသည် မြင့်လွန်းဟန်ရှိပြီး၊ ဈေးနိမ့်ပြီးရောင်းချရန် အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတိုင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဝေဖန်နေပါက၊ ၎င်းစတော့များသည် တန်ဖိုးနှိမ်ချခံရနိုင်သည်။
အကြံပြုချက် ၂. ကုမ္ပဏီကြီးများမှ သတင်းများသည် အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ် ကြီးမားသည့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် (သို့) အမေဇုန်၏ စတော့များ ခုန်ပါက၊ S&P ၅၀၀သည်လည်း တက်ဟန်ရှိသည်။ ထို့အပြင် စတော့များသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်းကိုလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ မြှုပ်နှံသူများမှ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းမြင့်မှု (သို့) စွန့်စားလိုစိတ်ကို အားပေးမှုနှင့် AUD နှင့် NZD ကဲ့သို့ အတိုးများသော ငွေကြေးများအတွက် ဝယ်လိုအားကို စောင့်ဆိုင်းသည့်အလျှောက် စတော့များမြင့်တက်လာခြင်းသည် ဒေါ်လာအတွက် ဝယ်လိုအားမြင့်နိုင်သည်။ Forex ဈေးကွက်၏ တုန့်ပြန်ချက်သည် USD၏ မကြာသေးမီက လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
ခြုံပြောပါမူ၊ ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါက၊ စတော့တန်ဖိုးများသည် ယခင်နှစ်ပတ်အတွင်း ၎င်း၏ ဒိုင်းနမစ်နှင့် ယှဉ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာမှာ ဈေးလမ်းကြောင်းပြောင်းမည့်ဟန်ရှိသည်။ ဖတ်ရှုခြင်းသည် ကြီးမားသည့်စကေးပေါ် ခန့်မှန်းချက်ကို ပစ်မှတ်ကျော်လွန်ခြင်း/ပစ်မှတ်အောက်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါက၊ အဝယ်လွန်/အရောင်းလွန်ဈေးကွက်သည် အံ့အားသင့်မှုသည် အပြုသဘောဆောင်ပါက အမှန်တက်သွားမည် (သို့) ဒေတာသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါက ကျသွားမည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာများ၏ အချက်အလက်အချို့:
Amazon.com Inc. - ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ဇူလိုင် ၂၇၊ အောက်တိုဘာ ၁၀
Facebook Inc. - ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ အောက်တိုဘာ ၃၀
Alphabet Inc. - ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ အောက်တိုဘာ ၂၆
Pfizer Inc. - ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
Visa Inc. - ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ဇူလိုင် ၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၃၁
ခုဆိုရင် သင်သည် ဝင်ငွေရရှိမှုများအပေါ် ငွေရှာရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ! MT5 တပ်ဆင်ပြီးတာ သေချာအောင်လုပ်ပြီး၊ သင့်အရောင်းအဝယ်များ စတင်ပါ!
ပညာရေး စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်